Online Shopping တွင်လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Martech Zone
အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့ ၀ င်သောအခါစျေး ၀ ယ်သူ၏အပြုအမူသည်အရေးကြီးသောအချို့သောအချက်များအပေါ်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
အလိုဆန္ဒ - အသုံးပြုသူသည်အွန်လိုင်းတွင်ရောင်းချသောပစ္စည်းကိုလိုအပ်သည်ဖြစ်စေလိုသည်ဖြစ်စေလိုသည်။
စျေးနှုန်း - ထိုဆန္ဒကြောင့်ကုန်ပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ။
ကုန်ပစ္စည်း - ထုတ်ကုန်သည်ကြော်ငြာကဲ့သို့ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ချက်များသည်မကြာခဏဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အကူအညီဖြစ်စေသည်။
ယုံကြည်ကိုးစားပါ - သင်ဝယ်ယူသောရောင်းချသူအားငွေပေးချေမှုမှပေးပို့ခြင်းသို့ပြန်ခြင်းသို့စသည်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်နိုင်သည်ဖြစ်စေ
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိုဘိုင်းပစ္စည်းများမှပင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပျှမ်းမျှလှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းသည် ၆၈.၆၃% ရှိပြီးအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်သူများသည်သူတို့၏အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ ပျမ်းမျှဗြိတိန် ၀ ယ်သူတစ် ဦး သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှပေါင် ၁၂၄၇.၁၂ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၅၅၀ ကျော်) သုံးစွဲခဲ့ပြီးထိုပမာဏသည်ဆက်လက်တိုးပွားနေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှည်းထဲတွင်တင်သော visit ည့်သည်တိုင်းကို ၀ ယ်သူဟုမယူဆသင့်ပါ။ အခွန်နဲ့ပို့ကုန်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ပစ္စည်းစာရင်းတစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့စျေးဝယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဘတ်ဂျက်ရှိရင်ပြန်လာပြီးအမှန်တကယ်ဝယ်မယ်။ သို့သော်ထိုစွန့်ခွာမှုနှုန်းအတွင်းလူများစွာသည်ဆိုက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုမတွေ့ရှိသောကြောင့်သာထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
သုံးစွဲသူများသည်အောက်ပါကာတွန်းရုပ်ပုံများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလုံခြုံစိတ်ချရသောမြန်ဆန်လွယ်ကူသောငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုချင်ကြသည်။ ငွေပေးချေမှုလုံခြုံရေးနှင့်ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ပျော်ရွှင်သောစျေးဝယ်သူများကိုအထောက်အကူပြုမည့်သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်ခိုင်မာသည့်ငွေပေးချေမှုရမည့်တံခါးပေါက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Total Processing ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပါ။ Online Shopper's Saga: လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေသည်.
အမြစ်ရင်းသည်သင့်ကိုပိုင်၏ ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့။ စားသုံးသူတစ် ဦး သည် site အသစ်တစ်ခုကိုစတင်လေ့လာပြီး၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်သောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးလွန်းသည်ဟုမခံစားရပါက ၄ င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းရန်မသွားပါ။ အမှန်တကယ်တွင်ငွေပေးချေမှုလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများသည်ကုန်သွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တောက်ပစ်သည်။ သူတို့ဟာကုန်ပစ္စည်းကိုအခြား site ပေါ်တွင်စွန့်ပစ်ပြီးရှာလိမ့်မယ်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် ပို၍ စျေးကြီးနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့ပိုမိုအဆင်ပြေပါကအပိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးရခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါ။
စုစုပေါင်းထုတ်ယူခြင်းသည်ခိုင်မာသည့်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်ကိုဖြစ်စေသောအဓိကအချက် ၄ ချက်ကိုဖော်ပြသည်
ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်သည်ဖောက်သည်များကိုကျယ်ပြန့်စွာပေးသည် ငွေပေးချေမှု options များခင်းကျင်း.
ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်ကကုန်သည်ကိုကုန်သည်ကိုပေးသည် ငွေပေးငွေယူတိုးမြှင့် tools များခင်းကျင်း ကမ်းလှမ်းမှုများကိုချဲ့ထွင်ရန်။
ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်သည်ခိုင်မာသည် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လိမ်လည်မှုထိန်းချုပ်ရေး ၎င်း၏ပလက်ဖောင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်။
ငွေပေးချေမှုရသည့်ဂိတ်သည်ဆက်လက်ရှိနေသည် အသစ်သောပူဇော်သက္ကာကိုလွှတ် အွန်လိုင်းအရောင်းအပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်လော့။